ESTV oo Laga Mamnuucay Siidaynta Arimaha Islaamnimka – Rasaasa News
ESTV oo Laga Mamnuucay Siidaynta Arimaha Islaamnimka
Jan 4, 2014 estv, ethiopia, Ogaden, ONLF, Somali
Degaanka Somalida Atoobiya (Ogaden) taariikh ahaan waxaa aad loogu qadarin jiray in uu yahay makaanka aqoonta iyo ku dhaqanka Islamka, waxaa kale oo aad loogu qadarin jiray dhaqanka, suugaanta iyo afka suuban ee Soomaalida.
Inkasta oo degaanka Soomaalida muddo dheer ku jiray gacanta Atoobiya, hadana marna uma suuroobin in Atobiya ku sameeyo faragalin wax ka badasha ku dhaqanka diinta, afka, suugaanta iyo dhaqanka midna.
Hadaba wixii ka dambeeyey 1991, waxaa xukunka Atoobiya la wareegay Tigray kuwaas oo la yimid waxyaabo ka baxsan gumaysigii ay Atoobiya ku haysay gabalka Ogaden. Qomiyada Tigray waxay ka mid tahay qoomiyadaha leh luuqda Hamatiga kuwaas oo dega buuraleyda sare, waana qoomiyada ugu kakan dhinmaca ku dhaqanka diinta masiixiga.
Lagga bilaabo 1991, waxaa ku socday degaanka Soomaalida (Ogaden), faragalin ayna hore u samaynin qoomiyada Axmaarada oo Atobiya xukumi jirtay.
Dadka wax ka qora taariikhda gumaysiga, waxay sheegaan in labo gumaysi aduunka ka jireen oo ahaa; Faransiiska iyo Ingriiska. Waxaa xun bay dhahaan taariikhyahanadu gumaysiga faransiiska, kolka laga eego dhexgalka iyo kasbashada bulshada uu gumaysto. Waa meesha ay Soomaalidu ka tidhaahdo “Libaaxa ciya iyo Libaaxa aamusa ka aamusaa xun.”
Xarunta maamulka degaanka Somalida Ethiopia, waxay ku dhex taal xayndaab wayn oo leh hal irid oo lagga galo, marka laga reebo xafiisyo micno daro ah oo aan wax shaqo ah qaban. Xarunta waxaa wada fadhiista masuuliyiin Somali ah iyo la taliyeyaal ka socda walaalaha Tigray.
Degaanka Soomaalida Atoobiya, waxaa ku soo kordhay cidhiidhi diimeed oo ayna dadku raali ka ahayn, hadii uu sii socdana wax wayn u dhimi doona Islaamnimada degaanka.
Maalmaha ciidaha Islamka, waxa la ogol yahay in dadku ay ku tukadaan xarunta maamulka degaanka, cidii oofin wayda amarka ciqaab bay mudan. Sallaada Jamcaha toban daqiiqo khudbad ka badan Sheekha akhriya ciqaab buu mudan, wayna qoran yahay. dhulka ugu wayn uguna muhiimsan magaalada Jijiga waxaa leh Kaniisada, waxaana gudaheeda lagu tarabiyeeyaa 1000 caruur ah oo asal Islaam ah. Xarumaha lagu barto Islaamka waxaa saaraan culays iyo cabsi galin iyaga oo loogu soo gabanayo Argagixiso.
TV-gga kaliya ee uu leeyahay degaanka Soomaalida Atoobiya, waxa uu baxa 24/7. Waxaana ku baxa sanadkii in ka badan 7.5 ml oo Birr, taas oo ah kirada sattelites-ka. Kharajka ku baxa shaqaalaha iyo samaynta barnaamijyada sanadkii waxba kama yara lacagta kirada.
ESTv, waa TV-ga kaliya ee ku baxa afka Somaliga oo aan waligii laga siidaynin barnaamij ku saabsan diinta Islaamka, walow ay Soomaalidu ay 99% tahay dad Islaam ah. Waxaa la iswaydiinayaa dadka haysta degaanka Soomaalida Atoobiya ma dad Masiixi ahbaa, iyada oo aan la iswaydiin in ay Atoobiya haysato degaanka, waayo waxay sheegtaan in ay haystaan Ismaamul hoosaad.
Sida aan ogaanay dadweynaha iyo masuuliyiin degaanka qaarkood ayaa codsaday in TV-ga laga siidaayo barnaamiyo la xidhiidha diinta Islamka inta ay doonaan ha la ekaadeene, maadaama dadka daawanayaa ay Islaam yihiin.
Xogg waxaan ku helay in qaar ka mid ah dadka codsiga sameeyey la xidhay. Maamulka TV-gana waxaa loo sheegay Diin Islaam daaye in aan ESTV laga siidayn karin Bisinka بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
Waxaa muuqata in ESTV, loogu talo galay in lagula dagaalamo ONLF iyo dadka Atoobiya diidka ah, kolka arintaasi dhamaatana la xidhi doono ESTV, sida aan xogta ku helay.
Waxaaa iswaydiin leh dadweynaha Soomaaliyeed ee degan degaanka Somalida atoobiya, diyaar ma u yihiin in ay ogolaadaan gaalnimo lagu khasbayo. Jawaabtu waa Haa, kolba haday ka cabsanayaan bisinka aan qabsano.
Puntland: Gaagaab oo ka Gaabsaday tartankii Doorashada Puntland
Gaas oo ku guulaystay madaxtinimada Puntland